Blogအက္ခရသညာတော | နတ္ထိ
« နတ္ထိရဲ့ နိဂုံး
အသောကရဲ့ အက္ခရာများ »
“ဤနေရာ၌ ဘဂ၀ါ ဘုရားရှင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သောကြောင့် လုမ္ဗိနီရွာ အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုပြီး ရှစ်ဖို့ တစ်ဖို့သာ ပေးစေပါသည်။”
“paying (only) an eighth share ([forasixth share] of the produce.)”
This entry was posted on March 31, 2008 at 3:59 pm and is filed under စာတိုပေစ, စင်္ကြာဂါထာ, အမှတ်တရ.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
5 Responses to “Blogအက္ခရသညာတော”
ကိုနတ္ထိ ကြီး ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့် ယုံကြည် ပါတယ် … ကျွန်တော်လည်း ခဏခဏ လာရောက် လည်ပတ် ဖြစ်ပါတယ် … အခု ကို အက္ခရ လို့ ပြောင်းခေါ် ရမလား မသိဘူး 😀
လင့်ခ် ထားလိုက်ပြီ ဗျာ 🙂
April 3, 2008 at 5:14 am | Reply
ဆရာစိုးရေ…ပို့သသော မေတ္တာကြောင့် အေးမြလျက်ပါ။ လာမလည်ရင် မျှော်နေမှာ။ ပြန်လင့်ခ်ထားလိုက်ပါပြီဗျာ။
Ka Daung Nyin Thar Says:
April 7, 2008 at 4:03 pm | Reply
ကိုနတ္ထိကြီးက နာမည်တွေ ဘာတွေ ပြောင်းပြီး ဒီ ဟက်ပီးဝေါလ်ထဲ ပြန်ဝင်လာတယ်လား။
ကြိုဆိုပါတယ် ကိုနတ္ထိရေ.. ပါဠိလို မကြိုတတ်တော့ နီဟောင်ပေ့ါဗျာ.. ဟိဟိ
ကဒေါင်း…လွမ်းနေဆဲပါ ဘလော့ဂါတွေ။ “ဟန်ဟောင်” ပါနော်။
လာလည်သွားတယ်။ ဘုရားရှင်ဖွားတော်မူရာဒေသကို နှစ်၂၀၀၀ကျော်မှ ရောက်လို့
အားမငယ်နဲ့နော်။ ဒီလူက ဘယ်နားနေမှန်းတောင် ခုထိမသိသေးဘူးဗျ။